HomeChampions LeagueEden Hazard Oo Raacay Kooxda Chelsea Ee Ka Degtay Madrid Iyo Eto’o Oo London Ku Hadhay (Sawiro)
Eden Hazard ayaa ku wehelinaya asxaabtiisa u safartay Madrid si ay uga qayb gallaan kulanka Semi Finelka horyaalka Yurub ee Ay Ateltico ku marti gallinayso garoonkeeda.
Xidiga reer Begiam oo ay ugu dambeysay safashada Chelsea kulankii kulanka labaad ee rubuc dhamaadka Champions League ee PSG, isagoo aan ka qayb gallin wax ciyaar ah oo ka dambeeyey tan iyo maalintaa , sidoo kalena aan mar qudha ka soo xaadirin garoonka tababarka ee naadiga the Blues ayaa doorkan la rajaynayaa inuu kamid noqdo xidigaha la safayo.
Nasiib darose Tababare Jose Mourinho ka sokow rajada uu ka qabo inuu safo Hazard , waxaa London kaga hadhay dhaawac fudud oo jilibka ah darteed , weeraryahanka Samuel Eto’o oo uu raadin doonaa cid booskiisa buuxisa kulanka Vicente Calderon Stadium.
Mourinho ayaa sida la filayo safka hore keeni doona Torres , waxa kale oo isna safarka kooxda ku wehelinayay goolhaye Petr Cech oo xanuun uga baaqday ciyaartii guuldaradu ka soo gaadhay Chelsea kooxda Sunderland ee Sabtidii.
Branislav Ivanovic ayaan cag soo dhigayn Vicent Celdron , oo ku maqnaanaya Ganaax , Halka Nemanja Matic iyo Mohamed Salah xaalkoodu yahay baaqasho sababtu tahay Chelsea oo ay ku soo biireen kadib bilowgii Champion – ka.
Beckenbauer oo si amakaag ah u fasiray guuldaradii Bayern ka soo gaadhay Madrid